Ukwahlulahlula i-caloriki kweziselo ezinxilisayo ▷ Discover Discover online ▷ ➡️
Ngaba uyathanda ukuphuma nabahlobo uyokusela, ubusuku beshizi kunye newayini okanye ibhiya kwimpelaveki, kodwa ufuna ukugcina ubume bakho busemgangathweni? Ke eyona nto ilungileyo kukujonga iikhalori kwiziselo ezinxilisayo.
1 Zonke iziselo ezinxilisayo zineekhalori
2 Ukusetyenziswa okuphakathi
3 Uhlobo lweCaloriki lotywala
Zonke iziselo ezinxilisayo zineekhalori
Ngokubanzi, iziselo ezinxilisayo zizele ziikhalori ezingenanto, njengoko zingenazo izixa ezikhulu zeemacronutrients ezintathu: iprotein, amanqatha, kunye neecarbohydrate. Ukongeza, ii-cocktails zihlala zinezithako ezinje ngesoda, ubisi, kunye neswekile, ezinokuthi zongeze ixabiso lazo.
Iziphuzo ezichongiweyo, eziphezulu kumxholo wotywala njengevodka, tequila, rum, kunye necachaça, zineekhalori ezimbalwa. Kungenxa yokuba zityiwe ngesixa esincinci.
Unokukhetha neziselo ezenziwe ngemveliso esempilweni, ezinje ngeti, iijusi ezintsha, amanzi ahlwahlwazayo, okanye amanzi ecoconut.
Ngokwe-World Health Organisation (i-WHO), ngenxa yeziphumo ezimfutshane kunye nezexesha elide zotywala obuninzi, njengokuphelelwa ngamanzi emzimbeni kunye nokugcwala kwesibindi, abasetyhini kufuneka banciphise ukusetyenziswa kwiidosi ezi-2 ngosuku (ubuninzi be-10 ngeveki), ngelixa amadoda enakho thabatha ukuya kwiidosi ezi-3 ngosuku (ungadluli kwi-15 ngeveki).
Idosi esemgangathweni ilingana netoti yebhiya (330 ml), iglasi yewayini (100 ml) okanye idosi yesiselo esingafunwayo (30 ml).
Ukukugqithisa kwiziselo ezinxilisayo kunokunyusa iswekile yegazi kunye namanqanaba e-triglyceride. Ngenxa yomxholo wekhalori, inokubangela nokuzuza ubunzima okanye ukuthintela ukunciphisa umzimba.
Oku kulandelayo linani leekhalori kwiziselo ezinxilisayo eziqhelekileyo. Amaxabiso aqikelelwa kwaye abhekisa kwi-100 ml, ekhumbula ukuba ii-distillates, ngokubanzi, zityiwa ngeedosi ezincinci (malunga ne-30 ml), nokuba zisetyenziswa kwimveliso yecocktails.
Ubhiya: Iikhalori ezingama-43
Iwayini: iikhalori ezingama-85
Mojito: Iikhalori eziyi-125
I-Lemon caipirinha ene-cachaça kunye neswekile: Iikhalori ezili-130
Thatha: 134 iikhalori
I-Lemon Caipirinha eneVodka kunye neSwekile: Iikhalori ezili-150
Tequila: 192 calories
I-Gin: iikhalori ezingama-200
UMargarita: iikhalori ezingama-200
ICachaça: Iikhalori ezingama-215
Rum: 230 calories
IVodka: Iikhalori ezingama-235
Hlanganisa ngobisi olunamanzi: ii-calories ezingama-240
Iwhisky: Iikhalori ezingama-250